विदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अ’वस्य पढ्नुहोला ! - Babal Khabar
मेरो श्रीमान् माल्दिभ्समा हुनुहुन्छ ।
Prevनिद्रा नलागेर राति छटपटी भयो ? सुत्नुअघि श’रीरको यो भाग दबाउनुहो’स्
nextयौ’न स’म्प’र्कको बे’ला म’हि’लाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ? यस्तो छ कारण